U Gaar Ah Ragga: Wakhtiga Ugu Fiican Ee Uu Ninku Samayn Karo Kulanka Sariirta
Sida laga soo xigtay Daraasad subaxnimada ayaa ah wakhtiga ugu fiican ee Ragga kulanka Sariirta iyada oo wakhtigaas tahay mid ay kor u kacsantahay rabitaanka kulanka sariirta sidoo kale uu Ninku si fiican u samayn […]
Dad badan oo ka tirsan Ragga & dumarka ayaa leh caado xun oo bur-buriso noloshooda kulanka sariirta iyaga oo aan ogayn in waxa ay samaynayaan saamayn ku yeelanayso kulankooda sariirta. Sidaas darteed Akhristaha sharafta lohow […]
In kasta oo ay jiraan cunnooyin iyo cabbitaanno kor u qaada Awooda Kulanka Sariirta ee Ragga & Dumarka sidoo kale meesha ka saaray dhibaatada ay dareemaan lamaanuhu ee kulanka sariirta, sidoo kale waxa jira Cabitaanka […]
U Gaar Ah Ragga: Hubka Ay Dumarku Ku Soo Jiitaan Ragga Oo La Ogaaday, Hadii Aad Isticmaasho Shaki La’aan In Uu Gacaliyahaagu Kaa Daba Dhareerin Doono.
Dumarka ayaa mar walba isku daya in ay ahaadaan kuwo cusub oo soo jiita qalbiga iyo indhaha Odaygeeda waxana la ogaaday hubka qarsoodiga ah ee ay dumarku ku soo jiitaan Ragga. Cilmi baadhis la sameeyay […]
4 Nooc Oo Ragga Ah Oo Ay Dumarku Necebyihiin, Ninka Balanta Badan Ayaa Ka Mid Ah.
Waxa la sheegaa in ay Raggu ka yimaadeen Adduun sidoo kale Dumarku ka yimaadeen Adduun kale sidaa darteedna suuragal maahan in midba midka kale had iyo jeer Hadaba Waxa Aan Halkan kusoo bandhigi doonaa 4 […]
Hadii Aad 4-tan Calaamad Isku Aragtaan Xidhiidhkiina Waa Mid Bir Ah Oo Aan La Loodin Kairn.
Inta lagu jiro Nolosha guurka waxa dhici karta dhibaatooyin ka dhex-dhaca lamaanaha taas oo keeni karta in uu bur-buro oo waliba uu sii socon waayo kuna dambeeyo in ay labada qof kala tagaan. Laakiin adayga […]
Waxa aan inta badan aragnaa gabadh aad u da’yar oo ka helaysa Ninka ka Da’weyn iyada oo waliba aad u doonta aadna u jeclaata waxana laga yaabaa in aad in badan is waydiiso waa maxay […]
lamaane badan ayaa ku dhibaatooda kulanka sariirta taas oo keenta dhibaatooyin badan oo dhanka qoyska ah ugu dambayna keenta in lamaanuhu sii wada joogi waayaan sabab la xidhiidha arintaas. hadaba waxa aan xogtan xasaasiga ah […]
Waligaa ma dareentay Baqdin aad ka qabto kulanka sariirta? Kaligaa Ma ahan dhibaatadu, Hadaba aan halkan kaga hadlano warbixintan xasaasiga ah. Waa maxay cabsida Kulanka Sariirta?. Cabsida Galisa kulanka sariirta ayaa ah xaalad qofka ku […]
Guurka Fiican ayaa leh Calaamado gaar ah oo kala duwan, Kulanka sariirta ee Nidaamsan ee Fiican ayaana ka mid ah Calaamadahaas taas oo saamayn fiican ku leh Nolosha Guurka Guud ahaan taas oo xoojisa xidhiidhka […]
Waxaa laga yaabaa in waqtiga saxda ahi yahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan geedi socodka galmada, Markaa hadii aad biyo baxdo ka hor Lamaanaha Kulanka sariirta ayaa noqonaya mid aan raali galin labada […]
Daraasad dhawaan la soo saaray ayaa lagu ogaaday in Lamaanaha Ragga & Dumarka qaarkood dareemaan Niyad jab kadib kulanka sariirta iyada oo 46% una dhiganta in ka badan lamaane 230 ah ay dareemaan Niyad jab […]
Wakhtiyada Uu Kulanka Sariirtu Halista Ku Yahay Lamaanah, Iska Ilaali Kulanka Wakhtiyadan.
Kulanka sariirta ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha Lamaanaha Is qaba waana mid ay ka helaan Raaxo iyo waliba Daganaansho waana mid Aas-Aas u ah guurka Xalaasha ah iyo waliba jacaylka iyo daryeelka […]
Maxay Lamaanayaasha Qaar Ugu Fashilmaan Kulanka Sariirta Habeenka Ugu Horaysa Ee Guurkooda?
Qaar ka mid ah Lamaanaha ayaa ku fashilma kulanka Sariirta Habeenka ugu horaysa ee xidhiidhkooda waxana Arintaas ka dambeeya sababo badan waxana jirta sharaxaado badan oo laga sameeyay arintaas dhanka cilmiga. Hadaba waxa aan halkan […]